Tambo yakangwara yeAura Apple Watch icharova pamusika munaKurume | Ndinobva mac
Tambo yakangwara yeAura Apple Watch ichasvika pamusika munaKurume
Ehe, isu tiri kutaura nezve yakangwara tambo yeApple Watch uye kwete yakajairwa quantizer bhendi. Iyo Aura kambani yakaratidzwa panguva yeCES 2019, tambo yakangwara yeApple Watch inoitiswa pima huremu, mvura, mafuta nemhasuru kuburikidza nhevedzano yema sensors akavakirwa mutambo.
Tambo iyi haina kuzoona mwenje muna2019, sekuvimbiswa nekambani, asi ichaita muna 2020, kunyanya munaKurume. Kana iwe uchida kuve mumwe wekutanga kugamuchira iyi smart tambo, Aura inototipa mukana wekuichengeta, pa mutengo wemadhora makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe.
Aura anoti tambo yesimbi inoshandisa bioimpedance kuongorora muviri wepamusoro, kuteedzera mashandiro emapapu uye shanduko mukufema nekuenzanisa iro ruzivo neruzivo rwekupomba.
Iyo tambo inokwanisa kuongorora njodzi yekutadza kwemoyo uye kuzivisa iye akapfeka, chinhu chinowanikwawo natively paApple Watch kubva kuChikamu 4. Zvisinei, kuyera kuumbwa kwemuviri uye hydration chinhu icho Apple Watch isingakwanise kuita panguva ino.
Iyi tambo yakangwara inogadzirwa naAura inowanikwa mumavara mana: nhema, girini, tsvuku uye grey, inoenderana nemhando dzese dzeApple Watch uye zvinoenderana nemifananidzo yacho yakagadzirwa nenylon (isina kutaurwa). Iine bhatiri (CR1620) ine inguva inofungidzirwa yemwedzi mitanhatu uye inoendesa mhedzisiro kuApple Watch "kuburikidza neiyo ultrasound interface". Iyo inowirirana neiyo Hutano kunyorera mukuwedzera pakuve isina mvura (IP 6).
Kana iwe uchida kuchengetedza tambo, unogona kutozviita kuburikidza iyi link Aura inotipawo chishongo chekuyeuchidza nemabasa akafanana eiyi tambo yeApple Watch, pamusoro pezvakakosha zverudzi urwu rwechigadzirwa, yeUS $ 179.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tambo yakangwara yeAura Apple Watch ichasvika pamusika munaKurume
Yakazara Hondo: Warhamer II Iyo Shadow & Iyo Blade DLC, ikozvino yawanikwa yemacOS
Apple inoda kuita kuti zvinhu zviomere kune vanobiridzira